Somaliland Oo Muwaadiniin Ganacsato Iyaga Iyo Gaadiidkoodu Muddo Ku Afduubnaa Goboladda Dhexe Ku Bedelatay Maxaabiis Budhacad Badeed Ah | Araweelo News Network (Archive) -
Published On: Fri, Sep 24th, 2010
Somaliland Oo Muwaadiniin Ganacsato Iyaga Iyo Gaadiidkoodu Muddo Ku Afduubnaa Goboladda Dhexe Ku Bedelatay Maxaabiis Budhacad Badeed Ah
Hargeysa(ANN) Xukuumadda Somaliland iyo maamul-gobolleedka Puntland, ayaa is-weydaarsaday maxaabiis muddo dheer ku xidhnaa xabsiyada Somaliland oo loo haystay falal budhcad badeednimo iyo muwaadiniin u dhalatay Somaliland oo iyaga iyo gaadiidkooduba
ku afduubnaayeen dhinaca Puntland.
Munaasibad lagula kala wareegay maxaabiistaa iyo dadka iyo gaadiidka madax furshada loogu haystay dhinaca Puntland ayaa maanta ka dhacday Deegaanka Gambadha ee duleedka magaalada Laascaanood, taas oo ay kasoo qayb galeen masuuliyiin ka socotay labada dhinac, isla maraakana ay goobjoog ka ahaayeen Odoyaal, Cuqaal iyo Saraakiil ka tirsan Labada Dhinac.
Xukuumadda Somaliland waxay Maamulka Puntland ku wareejisay 11-Maxbuus oo Ciidammada Ilaalada Xeebaha Somaliland ka soo qabqabteen Badda, kuwaas oo maxkamadda gobolka Saaxil ku riday xukuno kala duwan, iyagoo mudo ku jiray Xabsiga Mandheera.
Dhinaca Maamulka Puntland ayaa iyagu ku wareejiyey Somaliland todobada Gaadhi oo ah nooca Xamuulka Qaada iyo shan qof oo Dareewalo ka ahaa Gaadiidkaa, kuwaas oo muddo badan u Afduubaanaa dhinaca Maamulka Puntland. Maxaabiista lays-weydaarsaday, ayaa kuwa reer Somaliland oo ah ganacsato shicib ah waxa madax-furqasho loogu heystay Gobolka Mudug, waxaana qafaashay kooxo ay isku hayb yihiin kooxda loo haystay budhacd badeeda, halka kooxda budhcad-badeedka ah ee maanta la sii daayay ay ciidammada Somaliland ka soo qabteen xeebaha Badda.
Dhacdadan, ayaa noqonaysa tii ugu horraysay nooceeda ee dhexmarta Somaliland iyo Puntland, marka laga reebo maxaabiis dagaal oo labada dhinac hore isu weydaarsadeen.